Nyowani nyowani yekudyara mari system
Trading Battle Net .com inharaunda yekutengesa yekutengesa loom know-how, kugadzirisa, uye nhau.
Enda kune yekukurumidza purofiti nguva
Kukurumidza kutendeuka nguva
Hondo nguva, purofiti, kurasikirwa huwandu inogona kusarudzwa
Anenge maminetsi makumi matatu, 30% purofiti inogona kuzadzikiswa
Fast otomatiki dhipoziti uye kubvisa system
Enda kunochengetedza zvinhu mumatura
Chengetedza zvinhu sekutonga
Blockchain tekinoroji, transaction nhoroondo maneja
Yakakura yekutsinhana kuchengetedza system
Vhura API Chati
Enda kune chero ani zvake, yakakura purofiti chizvarwa
Chikamu chepamusoro chechizvarwa chemunhu wese
Direct nenjodzi kusarudzwa
Mari diki, kudzoka kwakanyanya kunogoneka
Yakakura mari, njodzi manejimendi uye yakasimba purofiti
Enda kune chaiyo yekutsika-tsika tsika
Yakakodzera nzira yekutsika
Zvese zvinotanga pasi pemamiriro akafanana
Zvemunhu VS Zvomunhu Unyanzvi kukwikwidza
Bhokisi reBlockchain tekinoroji dheti
Nguva yekudyara maminitsi makumi matatu! Goho racho rakapetwa kaviri!
Fair yekutengesa system uye chinzvimbo uchishandisa blockchain tekinoroji, yakachena yega vs. yekudyara wega yekudyara
Kwemari paradigm itsva
Yakakodzera kutengeserana nharaunda
Iine nyore interface uye yakakwira kuita yekumhanyisa injini
Kukurumidza uye kwakaringana kutengeserana
24-awa ekutengesa system
Yakagadzirirwa PC pamwe neye mobile,
Easy uye nyore kutengesa chero nguva, chero kupi
30 miniti transaction
Deredzwa nguva yekuita purofiti
Inobatsira mumusika webere
Sarudza yako yekurasikirwa ratio
Yakakwira misungo uye mibairo
Sangano uye isina simba
Mumwe nemumwe vs wega net invest yemakwikwi
Dynamic chaiyo loom kunge mutambo
Kutengesa Hondo Mapuratifomu
Pfungwa itsva yekudyara chikuva uchishandisa blockchain tekinoroji
Yakanyanya kunyudza interface
Facebook account yekutamba-sekutengesa
Twitter account yekutamba-senge kutengesa
Behance account yekutamba-sekutengesa
Dribble account yekutamba-senge kutengesa
Linkedin account yekutamba-senge kutengesa
Isu tinoronga kupa vashandisi manzwiro ekutamba isu simulation mutambo. Mune ramangwana, zviratidzo zvakasiyana siyana zvinogona kushandiswa kutenga uye kushandisa mabasa anobatsira ekutengesa.
Kushandisa Open API yekushambadzira kwakakura
Facebook nhoroondo yeOPEN API
Twitter account yeOPEN API
Behance nhoroondo yeOPEN API
Dribble account yeOPEN API
Linkedin nhoroondo yeOPEN API
Kusiyana neiyo iripo virtual simulation yekudyara sevhisi, iyo yekutengeserana kurwa basa inoshandisa iyo chaiyo cryptocurrency exchange's Open API uye inoshandisa chaiyo-nguva quotes uye liquidity sezvazviri.
Hondo mitemo inotemerwa nemushandisi
Facebook account yemahara mitambo yekutonga
Twitter account yemahara emitambo mitemo
Behance account yemahara emitemo mitemo
Dribble account yemahara emitemo mitemo
Linkedin account yemahara emitemo mitemo
Yese mirwi yehondo yeTroper Battle service inosarudzwa nemushandisi. Mushandisi anosarudza iyo mitemo kunze kwemirairo yakagadzwa nekambani. Isu tichaita hondo yekutengeserana pakati pevashandisi vakaungana maererano nemirau iyo iwe yaunomira iwe. Iko hakuna kusawirirana kwemushandisi pamusoro pemhedzisiro uye zvikamu.
Kushandisa mu-mutambo zvinhu
Facebook nhoroondo yeTBTT chiratidzo
Twitter account yeTBTT chiratidzo
Behance nhoroondo yeTBTT chiratidzo
Dribble account yeTBTT chiratidzo
Chinongedzo nhoroondo yeTBTT chiratidzo
Tokeni dzakasiyana dzinogona kudikanwa kuti dzigadzire imba yekurwira, uye imwe huwandu hwemubairo unobhadharwa kunhengo dzinogadzira imba yekurwira. Mitambo yakasiyana-siyana mini ichatangwa mu mini-mutambo mutambo wekutamba. Iyo mini-mutambo mutambo unoonekera uye uchashandisa toni dzakasiyana siyana kutora chikamu.
Yakavimbika system uye tekinoroji
Advance nhengo chiitiko (30 TBET tokens)
Nyorera kuti uve nhengo
Kutengesa Hondo Ruzivo
Trading Hondo Dzakanyanya Nhau, Ziva-sei, Nhau, Vatengesi Nharaunda
Anopfuura zviuru zana pre-akanyoreswa ekutengeserana hondo
Yedu yekutengeserana kurwa yeplatifomu yakadarika zviuru gumi zvepamberi vanyori vanyori ikozvino mazuva makumi matatu mushure mekurudziro yaJune 6 pre-kunyoresa chiitiko. Ndatenda zvakare nekufarira uye rudo. Tichaita zvatinogona kuti tikuratidzei neakachengeteka uye nani zvirinani kuripira mubereko. Ndatenda zvakare. Zvese zvekutengeserana hondo yepuratifomu vashandi.
TBET Chiratidzo Kuongorora
TBET Chiratidzo chekutarisa Mhoro, iyi ndiyo Kutengesa Hondo. Trading Battle Service ipuratifomu yevashandisi kumisikidza kurwira mitemo (nguva, mubairo, nezvimwewo) uye kutengesa akasiyana matenmarkini pane kuchinjana kukuru kuitisa hondo uye kuona nharembozha kuhwina mibairo. Nhasi, ndinoda kutsanangura chiratidzo cheTBET. TBET Chiratidzo Chekutarisa TBET Chiratidzo ndeye cryptocurrency iyo inoshanda semari yekuita mapurojekiti uye kushandisa kutengeserana kurwa mabasa, uye masevhisi mukati mekutengeserana hondo. Nhanganyaya Yakawanda YeTBET Token Overview[...]
Kushandiswa kweTBET tokens
Kushandiswa kweTBET tokeni TBET tokeni kunoshandiswa kushandisa mabasa akasiyana siyana uye masevhisi anopihwa muhondo dzekutengesa. Uye zvakare, basa rekushandisa TBET tokens richawedzera kuvandudzwa. 〉 Kutengeserana Hondo Yekubhadhara Mutero Chidimbu chebasa rekutengesa chinogona kusiyana zvichienderana nehuremu hwekudzoka kwe0.01%. Uye zvakare, kuitira kuti uite purofiti pakuderera kwemusika, makomisheni akadzika ane pesvedzero huru. Vapindi vehondo Nhanganyaya yakawanda TBET Chiratidzo Kushandisa[...]
Blockchain yekutengesa system
Blockchain Trading System Isu ticha shandisa kushandisa blockchain tekinoroji kukwikwidza kuwonekera kwemaoko ekutengeserana hondo.Tichadzidza kuona kuti kutengeserana kunogona kuitwa mushure mezvose kutengesa / kutenga mirairo zvinopfuudza chiratidzo checha blockchain. Kuti ugone kupa masevhisi akadaro, zvinodikanwa kuti uvandudze blockchain system inokwanisa yeiyo chaiyo-nguva yekutengesa chiratidzo. Isu tinoshandisa blockchain mhinduro kubva kumakambani ane tekinoroji yakaratidza uye yakakwira kuchengetedza hurongwa. Nhanganyaya Yakawanda Bhokisi reKutengesa Bhizinesi[...]
Nei vachivaka hondo yekutengeserana pane blockchain
Tine ruzivo mukumhanyisa cryptocurrency simulation services services usati wagadzirira iyo yekutengeserana kurwa chirongwa. Isu takasimbisa zvakawanda zvido zvevashandisi kuburikidza neshumiro. Pakati pavo, kubvunza kwakanyanya kubva kune vashandisi uye chipingamupinyi kubasa kwakange kuri kwekuratidzira kwekuratidzira kwekusagara uye kuiswa muhofisi '. Takafunga kushandisa blockchain's smart KwonTondola tekinoroji kuwedzera basa redu rakaratidzwa. Uye zvakare, mazhinji masevhisi aripo aifanira kuitirwa nevashandisi pachavo. Nhanganyaya Zvimwe Zvikonzero zvekuvaka Kutengesa Mabhatani paBlockchain[...]
Yakakosha purofiti chibereko kunyange nemari diki yekudyara
Kupa mabasa ekuita purofiti nehunyanzvi hwekutengesa, kwete zvishoma mari inowana mari, kunyangwe nemari shoma yekudyara. Mukutsinhana iripo, 0.1ETH inogona kudyarwa kuti ikwanise kuwana 100% gohwo, asi chete 0.2ETH inogona kuwanikwa. Nekudaro, neye yedu yekutengeserana kurwa sevhisi, unogona kuisa 0.1 ETH uye kuwana 1.0 ETH muhondo imwe. 〉 Basa reDimba rinoona purofiti kamwechete muhondo kubva kumafuro anongomirira kuwedzera mushure mekudyara Nhanganyaya Yakanyanya kukosha kugadzirwa kwemari nemari diki yekudyara[...]
Kutengesa Hondo Service Service
Iyo ine chinangwa chekupa kutengeserana kurwa sevhisi iyo inogona kuwana zvakakosha kudzoka pakudyara kunyangwe mune diki capital. Cryptocurrency yekutengeserana sevhisi inogadzirisa kutapurirana kwemagetsi dambudziko nekuvaka sevhisi nekushandisa Open API ye cryptocurrency exchange ine yakawanda yakawandisa mvura. Mune basa redu, kugona kwemushandisi kwekushandisa ndiko kwakanyanya kukosha. Vese vashandisi vanopinda mukamuri rekurwa yavanoda uye vanokwikwidza kutengeserana nemidziyo imwechete yekushandisa. Nhanganyaya Yakanyanya Kutengesa Hondo Service Service[...]
Maitiro ekujairira neane hunyanzvi batani & mini-mitambo Matambudziko nokubhejera
Nharaunda Q. Sei kubheja pane nyore kurwisa & mini-mutambo inogona kuva dambudziko gare gare nokubhejera ?? CEO: Takaongorora nyaya dzezviri pamutemo nezvirimo zvekubvunza, uye FX nemimwe mitambo yakafanana zvinetsa nekuti ivo vanopihwa mubairo wemukana. . Nharaunda Q. Kana iwe uri munhu akanaka wekutengesa, unogona kushandisa marari Kusvitsa zvimwe Nzira yekubheja pakurwa kuri nyore & mini-mutambo Dambudziko nokubhejera[...]
Pane chero kuchinjanisa kuronga kunyora muna 2020?
Pane chero kuchinjanisa kuronga kunyora muna 2020? CEO: Isu tinopa mabhebhu kune akawanda cryptocurrency exchanges uye kutaurirana nevashandisi vekutsinhana. Nekudaro, sezvo tagadzirira kwenguva refu, isu tiri kugadzirira yekutanga kunyorwa pane iyo huru yekutsinhana, saka kana iwe uchida kutarisa ramangwana rondedzero, ndapota uya kuTelegal room yedu pamberi kuti uone chiziviso chaicho-nguva. Uye chirongwa ichi chakanangana nebasa repasi rese kwete basa reKorea. Nhanganyaya Zvimwe Pane zvinotsanangurwa kuronga kunyora muna 2020?[...]
Ini ndinogona kutora chikamu mumakwikwi akawanda panguva imwe chete?
Q. Ini ndinokwanisa kugadzira makamuri akawanda uye kutora chikamu mumakwikwi akawanda panguva imwe chete? CEO: Chero mushandisi anogona kugadzira makamuri ehondo mazhinji uye zvakare kutora chikamu mumakamuri ehondo mazhinji. Urongwa hwazvino huri kuronga hwerengedzo yegumi yevanotora chikamu. Isu tinoronga kugadzirisa chiyero chekutora chikamu kwakawanda tichiona zvinodiwa nevashandisi uye nemamiriro mazhinji ekutora chikamu. Q&A chikamu Nharaunda Community Q. Kana iwe ukatarisa kune chena pepa, Nhanganyaya Zvimwe Ini ndinogona kutora chikamu mumakwikwi akawanda panguva imwe chete?[...]
Chete vashandisi vazhinji vanozokwanisa kurwisa kutengesa
Nhamba huru chete yevashandisi vanozokwanisa kurwisa kutengesa Q. Ndezvipi zvakanaka izvo vashandisi vanogona kuwana? Uye zvakare, zvinoita sekunge paine vashandisi vakawanda kuti vakwanise kuita mabhizimusi ekutengesa. CEO: Parizvino, yakawanda yemubvunzo yakagamuchirwa maererano nekusimudzira uye kushambadzira zviitiko zvehondo yekutengesa muKorea nekune dzimwe nyika. Isu tinoronga kushandira pamwe kushambadzira nevatengesi mukubatana, uye kuronga mifananidzo yemapuratifomu nekutora makwikwi ekutengeserana ayo anogara achiita zvigadzirwa. Kuunza vashandisi vakawanda kuve nehondo yekutengeserana nevazhinji vashandisi[...]
Tenga uye shandisa TBET tokeni uye zvinhu zvakaderedzwa
Q. Yema bato ekutengesa, isa nguva, mubairo, nezvimwe, uye kutenga zvinhu nemari yakaderedzwa nemari yeTBET tokens.Chiratidzo ichi chinoshandiswawo kugadzira makamuri ehondo, uye chii chinoisiyanisa nawo kubva kune aripo ekungofungidzira ekudyara masevhisi? Iwe unofunga chii chikonzero chekushandisa iyo yekutengeserana kurwa basa uye zvakanakira (zvinodzoka, nezvimwewo) zvaunowana! CEO: Ini ndinonzwisisa kuti chinangwa uye mabhenefiti ekushandisa chaiwo ma investor akasiyana. Mukana wakakura wekushandisa hondo yekutengesa kutengesa zvigadzirwa zvemadhijitari Paridzira zvimwe TBET Macheki, zvakaderedzwa zvinhu zvinoshandiswa kutenga[...]
Kutengeserana kurwa basa nenzira inoita mari neakachena kutengesa hunyanzvi
Q. Kana iwe ukaverenga iyo chena pepa, TBET tokens anonzi anowedzera purofiti kuburikidza nekutengeserana kurwa masevhisi nekubudirira kubva kune chena kutengesa hunyanzvi, kwete nekupomba mari nesimba remari. Iwe unowana 0.1 ETH mukati, asi chiratidzo cheTBETT chinoti kunyangwe ukaisa mari imwechete ye100 ETH, unogona kuwana 2 ETH muhondo imwe chete. Pamusoro, inonzwa zvakafanana nekutengeserana kwemajini, asi musiyano uripakati pekutengeserana kwemajini uye sevhisi yekutengesa yeTBET tokens Kusvitsa zvimwe Kutengeserana kurwa basa nenzira inoita mari neiyo yakachena kutengeserana hunyanzvi[...]
Hondo yekamuri yekugadzira inodiwa kune kutengeserana hondo
Q. Zvinozivikanwa kuti kana kutengeswa kwekamuri yekudyara kuchidikanwa kuhondo dzekutengeserana, uye hushoma huwandu hwevatori vechikamu vasingatore chikamu chakavakirwa imba yekutandarira, chiratidzo cheTBET chinoshandiswa kune zvakasikwa pamwe chete nekamuri yekudzima imba hazvidzoserwe. Kana zvirizvo, ndeipi nhamba shoma yevanhu vanodiwa uye ndedzipi dzimwe nzira dzekusimudzira imba yangu yekurwira? CEO: Nhamba shoma yevanhu kuti vatange kurwa, kusanganisira mutungamiri Nhanganyaya Yakawanda Yekutengesa Hondo inoda kugadzira imba yekurwira.[...]
Ndeipi iyo inopfuurira kusimbisa kweTBET tokens?
Q. Kubva pane maonero emushambadzi, ini ndoda kuti purojekiti iwedzere kukosha kwayo kwekudyara kuburikidza nekuenderera mberi kwekusimudzira. Panyaya yehondo yekutengesa, ndinoshamisika kana chiri chiitiko chenguva pfupi. Chii chinoramba chichienderera? Zviitiko zvine chekuita nekutengeserana zvinoitirwa pakasiyana siyana nguva nenguva. Mari yakapihwa nekuchinjana inopihwa zvakare semubhadharo. Chii chakasiyana kubva kune icho? CEO: Parizvino, masevhisi matatu aripo ekushandisa TBET tokeni muchikuva. Mune fomu iyo munhu wese anoshandisa TBET achienderera mberi Nhanganyaya Zvimwe Ndeipi iri kuenderera mberi kweiyo TBET tokens?[...]
Matai eTBET anoshandiswa sei?
Q. sei mateki eTBET anoshandiswa? Ndeupi musiyano kubva papuratifomu iripo? CEO: TBET chiratidzo chiratidzo che cryptocurrency icho chichafanirwa nemabasa emari yekuitwa kweprojekiti uye kushandiswa kwekutengeserana kurwa basa, uye kushandiswa kwebasa muhondo yekutengesa kuri chete kuburikidza neTBET chiratidzo. TBET tokeni anoshandiswa kekutanga, zvidimbu pamabhizimusi ehondo yekutengesa. Nhamba yekutengeserana kurwa hondo inogona kusiyana kunyangwe chibereko chiri 0.01%. Zvakare matepisi akadzika Nhanganyaya yakakura sei Chiratidzo cheTBETET chinoshandiswa?[...]
Chii chinonzi Kutengesa Hondo Mapuratifomu?
Q. chii chii Kutengeserana Hondo Ipuratifomu? Inotaridzika kunge sedura isina kujairika, asi ndokumbirawo utsanangure zvakadzama. CEO: Kutengesa Hondo inzvimbo yekutengesa inosanganisa zvinhu zve'Battle 'nekutengeserana kwezvinhu zvemadhijitari. Vashandisi vanotora chikamu muhondo yekurwira neiyo imwechete yekubhadhara mari (ETH) mukati meplatifomu uye kutengeserana nenguva imwechete uye mari, uye ipapo yepamusoro 50% yevashandisi vane yakakwira vanogovana mubairo wekutora chikamu (ETH). Nesystem yakadaro yekurwira, vashandisi vanogona kutengesa kudarika kutengesa vachishandisa exchanges iripo. Nhanganyaya Yakanyanya Ndeipi iyo Yekutengesa Hondo Mapuratifomu?[...]
Kutengesa Hondo Project Kusvitswa
Q. Ndokumbirawo muchizivisa muchidimbu iwe pachako uye chirongwa chako. CEO: Mhoro. Uyu ndiSuwon Kim, CEO weTrack War Project. Kuti ndizvizivise muchidimbu, ini ndiri director weAvBB, iyo yakapinda mubhizinesi rekutengesa yeBithumb, uye yakafambira mberi hunyanzvi hwe API hwakapihwa nemuchinjana kuti aratidze chirongwa chazvino. Kukudzwa kukwanisa kuburitsa chirongwa chekutanga chechikepe chehove yekubatisa hove. Yedu projekiti haisi yekungotengesa nekutenga mumusika we cryptocurrency, asiwo yekutengesa madhijitari midziyo. Nhanganyaya Yakawanda Yekutengesa Hondo Yeprojekiti Sumo[...]
Zerif Lite mugadziri: ThemeIsle